Tartan isboorti oo lagu soo gabo gabeeyay degmada Xamar weyne – Radio Muqdisho
Tartan isboorti oo lagu xoojinayay isdhexgalka bulshada oo uu soo qaban qaabiyay maamulka Degmada Xamar weyne ayaa shalay gelinkii dambe lagu soo gabo gabeeyay xarunta Degmada Xamar weyne oo ay cayaartii kama dambeysta ahayd isugu soo hareen labo koox.
Munaasabadii tartanka lagu soo gabo gabeynayay waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ka socda Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, xubno ka socday Maamulka Gobolka Benaadir, marti sharaf iyo dadweyne aad u fara badan.
Tartankan oo ay ka qeyb galeen afar koox oo ku cayaareysay magacyada afarta waax ee ay ka koobantahay degmada ayaa ugu dambeyn kulankii kama dambeysta ee tartanka isugu soo haray cayaartooy ka kala socotay Waaxyaha Hilaac iyo Kacaan ee deggmada, kuwaasi oo soo bandhigay cayaar wanaag oo ay jecleysteen dhamaan dadkii u soo daawasho tegay, iyadoo 2-0 ay guusha ku raacday cayaartooyda Kooxda Kacaan.
Guddoomiyaha degmada Xamar weyne Cabdiqaadir Maxamed Cabdiqaadir ayaa sheegay in ujeedka tartankan isboorti loo qabtay uu yahay sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka bulshada ku dhaqan degmada, waxaana uu ka mahadceliyay cayaartooydii ka qeyb qaadatay inta uu socday tarntan sida xilkasnimada leh ee ay ku soo bandhigeen cayaaraha.
Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo ka hadashay goobta ayaa sheegtay in tartamada noocaan oo kale ah ay qeyb ka qaadan karaan horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Iimaan Nuur Iikar ayaa maamulka degmada Xamar weyne uga mahadceliyay qabsoomidda tartankaasi, isagoo cayaartooyada labada dhinac ku amaanay cayaar wanaaga ay soo bandhigeen.
Gobo gabadii tartanka ayaa abaal marino lagu guddoonsiiyay dhamaan kooxihii ka qeyb galay, iyadoo kooxda ku guuleystay tartanka ee Kacaan la guddoonsiiyay koobkii tartanka.